စာမျက်နှာဒီဇိုင်းများ - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
All Groupsသင်၏အဖွဲ့ များ စာမျက်နှာဒီဇိုင်းများ
့home page ဒီဇိုင်းများဝေမျှကြမယ်
Latest Activity: Jan6မျှဝေမယ် Twitter
စာမျက်နှာအတွက်ကုဒ်များကို copy လုပ်လိုက်ပါ...ပြီးလျှင်
သုံးခုအနက်... ( Advanced )ကလစ်ပြီး ထိုထည်းမှာ ကုဒ်များကိုဖျက်လိုက်ပါ
...ပြီးလျှင် Advanced box တွင်ယခင် copy လုပ်ထားသောကုဒ်များကိုထည့်လိုက်ပါ...
ပြီးနောက် save လိုက်ပါ...
Started by CLOUD. Last reply by win htun min Mar 25, 2012. မိမိစာမျက်နှာကို အလှဆင်ဖို့ ဒီဇိုင်းအသစ်များ
Started by ရဲဂျာ. Last reply by frogfish Jul 21, 2011. To Write Lover On Her Arms တဲ့
Started by ရဲဂျာ Mar 3, 2011. မီးရောင်စုံဒီဇိုင်း
Started by ရှင်း Mar 2, 2011. အစိမ်းရောင်ကောင်မလေး
Started by ရှင်း Mar 2, 2011. သဘာဝဒီဇိုင်း
Started by ရှင်း Mar 2, 2011. နဂါးမင်းသမီးစာမျက်နှာကုဒ်
Started by ရှင်း Mar 2, 2011. အားလုံးကြည်ရန်
You need to beamember of စာမျက်နှာဒီဇိုင်းများ to add comments!
Comment by မျိုးမင်းထွန်း on July 21, 2012 at 12:53am လေ့လာနေပါတယ်အခုလိုရှင်းရှင်းလေးတင်ပြထားတော့
လေ့လာတဲ့သူတွေအတွက်ကောင်းပါတယ် Comment by မေ on February 23, 2012 at 5:13pm ကုဒ်ကိုယူလို့ မတတ်ဘူး။အိမ်ပုံလဲဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိဘူ? Comment by 3N!H$ on February 19, 2012 at 3:14pm ဘယ်လိုကြီးလဲ......
Comment by ထက်အောင်ပိုင် on January 28, 2012 at 3:14pm ကုဒ်တွေလည်း မတွေ့ဘူးခင်ဗျ Comment by အောင်သက်ဟန် on December 24, 2011 at 10:25pm code တွေမတွေ့ဘူး အစ်မရဲ့။
ကူညီပါအုံး။ Admin Comment by ၀ိဝိ on October 31, 2011 at 1:42am စာမျက်နာကုဒ်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်နော်.....အစ်မ Comment by Ko Taw Wynn(Gu Gue Gwam) on September 22, 2011 at 1:17pm မင်္ဂလာပါ.... ကျွန်တော့် စာမျက်နှာက တော့ တက်သလောက်လေးပြင်ထားပါတယ်... လာရောက်ကြည့်ရှု့ ဝေဖန်ပေးကြပါနော်.... အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်...။
Comment by နှင်းဆွေဇင်ခိုင် on March 3, 2011 at 3:02pm ကျေးကျေး Comment by အောင်ဖြိုးစံ on March 2, 2011 at 10:33am ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲမသိလို့သေချာရှင်းပြပါအုံးနော် Comment by may zaw on March 2, 2011 at 7:36am goodmorning .
thanks u so much. Members (147)
4. ချစ်၇အောင် (အညာသားလေး)